IXESHA ELIZAYO: UKUNGCOLA OKUNGCOLILEYO KWE-2 ALBUM - IINDABA
Ukungcola okungcolileyo 2
Ungcolile Ukutshiza Mbini ibhulashi ecaleni kweendawo zokugqibela zealbham yexesha elizayo Ukunyaniseka . Ukwakha i-mixtape ebuyayo enamandla, I-DS2 mfiliba kwaye akaxoleli, libali lokuhlengwa kwendoda eqinisekile ukuba lihambile ixesha lokuba umphefumlo wayo uhlangulwe; endaweni ye-arc yoloyiso, singena nzulu kwaye singene nzulu kwi-future's dystopian universe.
Kwiveki enye uKamva ubhengeze umhla wokukhutshwa Ukungcola okungcolileyo 2 , ukukhululwa kwakhe okwesithathu okusemthethweni, i-NASA's New Horizons spacecraft yagqibezela ukubhabha kokuqala kwePluto. Yayo idatha ibisityhila iplanethi emfutshane njengehlabathi elinomkhenkce, elinzima, elisengumbono wejoloji, ophawulwe ngokuqaqamba, uphawu ezimilise entliziyweni embindini weendawo ezimnyama kakhulu. Ayisiyondawo ifanelekileyo yokurekhoda, owathiya ulindelo-oluchasayo Ityala emva kweplanethi engaqondakaliyo: luphawu lokugqibela lwenqanaba lakutshanje kunye nelona lifanelekileyo lomsebenzi weKamva. Iinkwenkwezi azikaze zilungelelaniswe ngokungathandabuzekiyo nendoda ezelwe nguNayvadius Wilburn, ukumkani olawulayo waseAtlanta owasasaza i-trilogy ye-mixtapes esemgangathweni ye-albhamu ukusukela ngo-Okthobha ophelileyo ukuze abambe ezinye izinto ezilungileyo ezilahlekileyo njengoko wayeqonda ukuba loluphi uhlobo lomculi awayefuna ngaphezulu kweminyaka emithathu edlulileyo.
Kubekho ukubuyela umva ngokuchasene ne-albhamu yesibini Ukunyaniseka Kunyaka ophelileyo-nkqu noKamva sele ekude neprojekthi, awayeyikhulula ngaphambi kokuphela kabuhlungu kobudlelwane bakhe nowayesakuba ngumlingane uCiara. Kodwa Ukunyaniseka yayingelilo icwecwe elibi nangayiphi na indlela; bekudidekile nje. Kwakucacile ukuba ikamva lalitsalwa kumkhombandlela omninzi ngaxeshanye: i-sledgehammer street banger, i-ranger ballanger eyedwa, igama elikhulu lisebenzisana no-Kanye kunye no-Pharrell. I-albhamu yenkuthazo yealbham yayi 'Ndinguwe' , ingoma yothando lwangaphambili oluthandekayo kakhulu ukuza kuthi ga ngoku. Kodwa kwakungeyonto eyenzeka ngengozi ukuba ibone ukufunda kwexesha elizayo ukuba avelane neqabane lakhe ngokuthi abe nguye, azithelekise naye (thelekisa nomxholo webhonasi obizwa ngokufanayo kodwa ongaphantsi kakhulu 'Ndiya kuba ngowakho'). Wabanjwa phakathi kwesazisi esingathandekiyo: iscreen sothando esenza iingoma noMiley Cyrus, kunye nehustler yaseLittle Mexico, iZone 6, abadlala ngothando ngokurekhodwa. 'Ndicinga ukuba ndilahlekelwe yintliziyo yam umzuzwana kunye nesiqingatha,' ucule ngenceba ku Ingoma yesihloko ye Umdaka onguSprite , i-2011 mixtape apho I-DS2 wanqwala ngentloko.
Ngubani kwikamva elingaqhelekanga
'Ndizamile ukundenza inkwenkwezi ye pop, kwaye benza i-monster,' I-snarls zexesha elizayo 'Ndikhonza i-Base', umkhondo we-skuzzy, okhohlakeleyo ohamba ezantsi I-DS2 ’Iingcango kwangethuba, iMetro Boomin yayo yabetha eyakhelwe ngapha koko kuvakala ngathi yimvana yedini kwimizuzu yokugqibela yobomi. Elo pivot lisuka kwiqhawe liye kwi-villain ngumbono ophambili we-albhamu, isiphelo sohambo olusuka Isigebenga ’Hedonism engxwelerhekileyo kukubhomboloza okundindisholo kwe 56 Ebusuku . Isigqebelo esikhohlakeleyo kukuba uKamva wayelungile ekubeni yinkwenkwezi ye-pop, ubuncinci ngengqondo yemfesane; UPluto , kunye neebhaladi zayo ezimenyezelayo malunga nokukhangela uthando ngethotshi, ihlala yenye yezona mpawu ziphambili zelebheli kule minyaka mihlanu idlulileyo. Kodwa wayehlala ebonakala engonwabanga ekukhanyeni, ephuma kumlingisi ofanayo noCiara njengeAtlanta ekhononda iMontague.
Akukho nto yokuzazi ivuliwe I-DS2 . Indalo iphela imfiliba kwaye ayixoleli, ibali lokuhlengwa kwendoda eqinisekile ukuba lihambile ixesha lokuba umphefumlo wayo uhlangulwe; endaweni ye-arc yoloyiso, singena nzulu kwi-dystopia yexesha elizayo. Phambi kokuba sive ilizwi lakhe konke konke, kwingoma yokuqala 'Ndicinga ukuba Yembalela', siva isoftware yekhowudi inyuselwe kwisoda, isuntswana lomkhenkce eliqhekezayo kwi-styrofoam. Iingoma ekukuphela kwazo ezifana nayo nayiphi na into efana nokubethwa ngonomathotholo ubukhulu becala zikhutshiwe kwaye zanikezelwa kwiitrakthi zebhonasi ('Fuck Up some Commas', 'Trap Niggas'), kwaye inye kuphela into UDrake , owenza ikamva elibuhlungu nelincomekayo kwikamva 'Apho Ukhona'. Akukho ndawo yokutolikwa gwenxa: Ikamva alifuni ukuba ngumzekelo wakho. Lo ngumculo wama-nihilists, wokungakhathali, kwabo bamkela ubumnyama kuba bengaboni enye indlela.
Ngomsebenzi wakhe weposi- Ukunyaniseka Ukukhutshwa, uKamva ukwenze kwacaca ukuba ngubani angathanda ukumthethela, kwaye akasenamdla wokuthandana, kwaye umsebenzi wakhe wakutshanje sisenzo esicacileyo ngokubhekisele kumhla wakhe womntu owayemxhasa ngaphambili UPluto . Uninzi lwemveliso luphethwe yiMetro Boomin kunye ne-808 Mafia's Southside, eneembonakalo ezimbalwa ezivela eZaytoven kunye neqaqobana leAtlanta. Bonke aba bantu banobudlelwane obucacileyo neKamva, abasebenze nabo iminyaka, kwaye i-chemistry yabo ibonelela ngokudibana kunye nokucaca kombono olahlekileyo kwii-albhamu zakhe zangaphambili ezimbini.
Kodwa njengestylist kunye nomqokeleli wezobuchwephesha, uKamva esebenza kwinqanaba elingenakuthelekiswa nanto kwiminyaka emihlanu yediski, ii-mixtapes zakuqala nazo zonke. Njengombalisi wamabali, uguquke ngokuqaphelekayo, amazwi akhe acacisa isibongo esithile. 'Imveliso yabo i-roaches kubo i-ashtrays / Ndiyayifaka uthando ngosuku olubi / Ndibhaptizwe ngaphakathi kumdlalo we-purple actavis,' udlwengula 'Ndikhonza iSiseko'. I-Miniscule kodwa iinkcukacha ezibalulekileyo ziza kugxila, njengoluhlu lwezinto eziqinileyo eziqinileyo, eziphazamisayo ukuvala. Kwi 'Kno the Meaning', ephindaphindwe njengembali yomlomo ka Indlela yesilwanyana kwaye 56 Ebusuku iiteyiphu, sidibana noMalume wakhe uRonnie owayehlamba iimoto kunye noMalume uDon owayephanga iibhanki, izifinyezo zamadoda awayekhe wajonga kuwo. Ikamva lahlala liqondile, lingaze libe neentloni lokuvuma ukudakumba okanye ukuthatheka, kodwa amabali awazange azive egxile kakhulu, ekhohlakele, okanye esesichengeni kunalapha.
Ubumnandi ngumxholo obambekayo emsebenzini wakhe wakutshanje, kuba kubonakala ngathi uhlala efuna ukubaleka. Ngekamva, inkumbulo ebukhali isisiqalekiso, esingade siyophulwe ziigophe zenyanga. (Upela oku 'Kunzima', enye ye Isigebenga ’S more tracks underrated; 'Kunqabile, akukho nzima, akukho namnye ongalibala nanye into,' uyangxama, ethatha ixesha elininzi nomhlobo wakhe ongasekhoyo. I-DS2 , imbi njengemixholo yayo inokuba: ikwindawo eneenkcukacha kwaye ine-hazy, iyadibana kabuhlungu ngelixa ikhuthaza ukungahambelani, idala imeko efana nokubonakala kweeklabhu ukugqobhoza ngomatshini wenkungu kunye nomsi obuthuntu, okanye umqadi wendlu yesibane ekhangela ebumnyameni Ukwaphuka kwenqanawa.
Oku kungavisisani kudala ukungavisisani okubalulekileyo kwelicwecwe phakathi koko kuchazwa nguKamva ngokoqobo kunye noko avakalelwa ngokwenene. 'Ndigalela iiziphu ezimbini / ndiziva ngcono,' uyakhala xa ejikeleza, melodramatic 'Slave Master'. 'Ngcono,' apha, izele yimixholo engeyiyo — egqithileyo kodwa isiqabu esikhawulezileyo sokunikezela kwisilingo. Le ayisiyo icwecwe elikhuphisana nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi njengeempawu zerock, njengoko ikamva lakhe iHendrix persona lalinokuba nalo. Ukuthetha ngokungakhathali kweziyobisi kunye nemixholo ye-boilerplate yomgibe iphantsi kobukrakra obungapheliyo, ukwenyanya, kunye nesicaphucaphu. 'UThixo esikelela wonke umgibe we-niggas' ungaphezulu kokukhwaza nje kubantu abakhule njengaye, sisibongozo esinyanisekileyo. Ndiyazi ukuba umtyholi uyinyani, uyathembisa 'ngeGazi kwiMali', enye yezona zinto zibalaseleyo kwimveliso yelicwecwe, ngandlel 'ithile elinoburharha kunye ne-baroque kwangaxeshanye. Oobhontsi bexesha elizayo ngamatyala anegazi, akhumbuza ngobomi awonyukele kubo kodwa akanakuze aphuncuke, kangangoko anokuba wazama.
ihashe eliselula eligeza
iteyiphu ezimnandi vol 2 tracklist
Wamkelekile abaphathi bamazwe angaphandle i-vinyl
I-albhamu emnandi kakhulu
eyaziwayo b.i.g. ukuzalwa ngokutsha
ufile prez masikhulule